Hay’adda IMF oo soo dhaweysay horumarka qorshaha deyn dhaafka Soomaaliya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Hay’adda IMF oo soo dhaweysay horumarka qorshaha deyn dhaafka Soomaaliya.
Hay’adda IMF oo soo dhaweysay horumarka qorshaha deyn dhaafka Soomaaliya.
Previous articleWasiirka Boostada oo ka qeyb galay Shirka Wasiirrada Isgaarsiinta ee Jaamacadda Carabta.
Next articleDowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay warbixinta hay’adda IMF.